Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Antony tsy mampino 21 hanoloana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili
Tale Mpanatanteraka UNWTO teo aloha nandritra ny taona maro, nanome Andriamatoa Carlos Vogeler 21 Antony lehibe izay mahatonga azy io ilaina hananana Sekretariatin'ny UNWTO hafa
Carlos Vogeler, Tale Mpanatanteraka teo aloha an'ny UNWTOmanatevin-daharana ny sekretera jeneraly roa teo aloha Francesco Frangialli sy Dr.Taleb Rifai, ary ny Profesora Geoffrey Lipman ao amin'ny Fanentanana amin'ny tambajotra eran-tany ho an'ny fizahan-tany hiantohana ny fahalalam-pomba amin'ny fifidianana UNWTO ho avy.
Fa maninona no ny filatsahan-kofidian'ny HE Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa avy any Bahrain dia misy fanantenana lehibe ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany.
Natomboka tamin'ny taratasy misokatra nosoratan'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha
Francesco Frangialli sy Dr.Taleb Rifai, notohanan'ny sekretera jeneraly mpanampy teo aloha, Profesora Geoffrey Lipman, ary koa ilay teo aloha Tale mpanatanteraka ao amin'ny UNWTO Carlos Vogeler Mangataka ihany koa ankehitriny ny fanovana ny mpitarika ao amin'ny UNWTO Sekretariat ary ny fanoloana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili.
21 Antony mahatonga ny fanovana eo noho eo maika ny UNWTO
1. Nanomboka tamin'ny taona 2018, ny UNWTO dia natory tsy ho Organisation, tsy namelabelatra ny fahafaha-manaony niaraka tamin'ny mpikambana ao aminy, ary nanatontosa programa momba ny asa tsy dia misy zava-bita firy manoloana ny baikon'ny sekretera jeneraly teo aloha, Andriamatoa Frangialli ary Andriamatoa Rifai.
2. Ity fifandanjana mahantra ity dia vokatry ny antony telo lehibe: ny voalohany, ny tsy fisian'ny fitarihana fizahan-tany sy ny fahalalana avy amin'ny SG ankehitriny, Zurab Pololikashvili, izay nanampy tamin'ny fanaovana ny UNWTO ho mpilalao iraisam-pirenena tsy misy dikany, amin'ny fotoana anaovana fanapahan-kevitra hentitra no takiana. Ny faharoa, ny kolontsain'ny fanandevozana sy ny tahotra izay napetrak'i Zurab Pololikashvili teo amin'ireo mpiasan'ny UNWTO hatramin'ny nandraisany ny asan'ny SG an'ny UNWTO. Ny fahatelo, vokatry ny roa teo aloha, izay nanimba ny fandraisana andraikitra tamin'ny lehilahy sy vehivavy tsara indrindra tamin'ny fanapotehana ny fandrisihana mba hanompoana ny maha-mpikambana ary soloina ny toetran'ny tahotra sy ny fankatoavana an-jambany ny fenitra birao anatiny sy ny fanompoana ny mpitondra. mitazona ny asany.
3. Manoloana an'ity sary manjavozavo ity, ny filatsahan-kofidian'i HE Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa avy any Bahrain dia fanantenana lehibe ho antsika izay manohana ny fizahantany sy manome lanja ny UNWTO, satria ny mampiavaka azy manokana sy ny maha-matihanina azy dia tsy mitovy amin'ny an'ny ankehitriny. SG. Manana fahalalana lalina momba io sehatra io izy, mpitantana mahay momba ny loharanon-karena olombelona sy ara-bola ary maniry ny hametraka ho laharam-pahamehana ny olan'ny mpikambana, manomboka amin'ny zavatra rehetra izay tsy vita mba hamahana ireo voka-dratsy ateraky ny fizahan-tany ao amin'ny Covid- 19.
4. Amin'ity lalàna ity, ny SG amin'izao fotoana izao dia nanao zavatra tsy araka ny tokony izy tamin'ny fitantanana azy, manohana ny tombotsoany manokana amin'ny an'ny Organisation.
5. Ohatra iray mazava ny tolokevitra nomeny ny Executive Council mba hampandroso ny fivorian'io Filankevitra voalaza io, izay tokony hanolotra ny SG hatramin'ny 18 Janoary 2021 ao Madrid, raha tokony ho 2021 Mey ny daty fankalazana mahazatra azy.
6. Io fandrosoan'ny daty io dia nampihena be ny fotoana hanolorana ny filatsahan-kofidina ho SG, satria nalaina tao amin'ny filankevitr'i Georgia izy io, ny firenena SG, izay tsy mpikambana ao amin'ny filankevitra akory, tamin'ny 17 septambra 2020 , mametra ny fe-potoana fampisehoana kandidà amin'ny 18 Novambra 2020 (roa volana alohan'ny datin'ny Filankevitra vaovao). Raha ny mahazatra dia azo naroso hatramin'ny faha-2021 martsa ny filatsahan-kofidina. Mazava ho azy fa manohana ny SG ankehitriny ity toe-javatra ity amin'ny famerana ny isan'ny kandidà hifaninana amin'ny toerana. Raha ny marina, ny firotsahan'i Bahrain ihany no afaka tonga ara-potoana, izay tsy fahita mihitsy, satria tamin'ny fifidianana rehetra teo aloha dia efa maro ny kandidà avy amin'ny firenena samihafa.
7. Ny antony nanomezan'ny SG ny Filankevitra tamin'ny volavolan-keviny hampandroso ny daty dia ny hampifanaraka izany amin'ny FITUR, noho ny fangatahan'ny Governemanta Espaniôla, saingy andro vitsivitsy taty aoriana dia nanapa-kevitra ny hamindra ny datin'ny FITUR tamin'ny volana iray i Espana. tamin'ny volana Mey noho ny fahasarotan'ny dia nataon'ny delegasion'ny firenena tamin'ny volana Janoary noho ny areti-mandringana. Na izany aza, nanapa-kevitra ny SG fa hitazona ny datin'ny volana Janoary tsy misy antony marim-pototra.
8. Etsy ankilany, ity filankevitra mpanatanteraka voalohany amin'ny taona ity dia tompon'andraikitra amin'ny fankatoavana ireo kaonty voamarina, araka izay napetraka ao amin'ny lalànan'ny fikambanana. Izany no ho
tsy azo atao satria ny kaonty voamarina dia tsy ho vonona hatramin'ny volana aprily, ka mandika ny lalàna.
9. Ankoatr'izay, ny toe-javatra misy ankehitriny sy azo tsinjovina amin'ny volana janoary amin'ny areti-mandringana dia tsy hahafahan'ny ankamaroan'ny delegasiona mankany Madrid handray anjara amin'ny fivoriana lehibe toy izany, ary tsy maintsy hiantehitra amin'ny fisian'ny Ambasadaoro sy / na raikipohy fandraisana anjara hybrid mifanatrika sy an-tserasera. Ny fivoriana iray, manan-danja toa an'ity, izay manondro ny SG, dia tokony hatao miaraka amin'ny antoka rehetra amin'ny fahamendrehan'ny fizotry ny fifidianana ho ara-dalàna, izay toa tsy azo tanterahina amin'ireo toe-javatra ireo.
10. Tsy misy ny fanamarinana amin'ny fampiroboroboana ny datin'ny Filankevitra, afa-tsy ny fanompoana ny tombontsoan'ny SG ankehitriny amin'ny filàny hofidina indray.
11. Nandritra io fe-potoana io, ny fivorian'ny filankevitra dia nanjary fivoriana ara-tsosialy marobe niaraka tamin'ny hetsika fialamboly marobe, nametra ny fotoana natokana ho an'ireo fivoriana sy fifanakalozan-kevitra momba ny fitantanana ny Organisation, izay midika fa ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra dia manana olana amin'ny fampiharana ny asany amin'ny fiasan'ny The Sekretera, izay tompon'andraikitra amin'ny Kaonsily.
12. Ny ankamaroan'ny dia nataon'ny sekretera jeneraly, indrindra nanomboka ny taona 2019, anisan'izany ny taom-piarenan'ny taona 2020, dia natao ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra mpanatanteraka, fa tsy drafitra fitsangatsanganana mandanjalanja kokoa any amin'ny faritra sy firenena maro samihafa na inona na inona izy ireo dia mpikambana ao amin'ny Filankevitra na tsia. Ilay fikasana tsy hita noanoa dia toa miharihary loatra amin'ny fahazoana vato, fa tsy serivisy ho mpikambana. Saingy ny Fikambanana dia misy firenena 150 mahery ary tsy ireo mpikambana 35 EC ihany no manolotra ny sekretera jeneraly manaraka.
13. Ny fifandraisan'ny UNWTO amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena marobe (WTTC, PATA, WEF, sns.) Eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia very hery, fitaomana ary fanajana mandritra io didy io.
14. Ny Secretariat dia voalamina manodidina ny maha-izy azy manokana an'ny SG tsy miraharaha ny fahamendrehana sy ny traikefan'ny mpiasa. Mpikambana manan-danja sy manana traikefa marobe ao amin'ny fikambanana no voatery niainga nandritra io fe-potoana io.
15. Mikasika ny tany amerika, ny talem-paritra iray dia tsy notendrena akory taorin'izay lasa teo ny 31 desambra 2017. Ny Talem-paritra lefitra, izay nahavita asa tena tsara, dia namela loharanon-karena voafetra tokoa, ary notanana tao ny fahaiza-manao mitovy amin'ny solombavambahoaka nefa tsy nanendry tale iray, izay mampiseho ny tsy fahampian'ny fahalianana sy ny fiheverana ny filan'ny mpikambana ao amin'ny Amerika.
16. Ny talen'ny Human Resources dia nandao ny Organisation tamin'ny taona 2018 ary tsy nanaiky ny fomba fanao tsy etika izay natomboky ny SG tamin'ny resaka olan'ny mpiasa.
17. Ny talen'ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanam-bola ary ny Lehiben'ny Teknolojian'ny fampahalalam-baovao sy ny serasera, izay nandao ny Fikambanana tamin'ny taona 2018, dia nametraka fitoriana an'i Zurab Pololikashvili tany amin'ny lapan'ny International Labor Organization (ILO). Ny UNWTO dia efa nanolotra vola maherin'ny 200,000 Euros ho tambin-karama mety hitranga noho ny fahasimbana mifandraika amin'ireo fitoriana ireo, ny fahasimbana izay, amin'ny vola notapahan'ny fitsarana dia tsy maintsy aloan'ny Mpikambana.
18. Ny fahaiza-manao voafetra ho an'ny fanehoan-kevitra sy ny fitarihana ny UNWTO amin'ny toe-java-tsarotra misy ankehitriny, noho ny areti-mandringana, dia voatsikera mafy tokoa teo amin'ny faritry ny fizahantany iraisam-pirenena, nametra-panontaniana ny amin'ny andraikitry ny Organisation. Na ny mpikambana maro aza dia naneho ny fahadisoam-panantenany amin'ny mpitantana ankehitriny.
19. Ny firotsahan-kofidian'i Bahrain an'i Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa dia hisolo tena ny vehivavy voalohany hitantana ny sekretarian'ny Fikambanana hatramin'ny nananganana azy 50 taona lasa izay ary hanampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fikambanana ary hamerina ny fahamendrehana etika sy ny fitantanana ny mpikambana ao aminy.
20. Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa, minisitry ny kolontsaina sy ny fahagolan-tany ankehitriny ao amin'ny fanjakan'ny Bahrain, dia olona hajaina tokoa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary manana laza ambony, indrindra fa ny UNESCO. Niasa tamina tetikasa iraisam-pirenena marobe mampifandray ny kolontsaina sy ny fizahantany izy.
21. Amin'izao fotoan-tsarotra izao, Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa dia manana fepetra mety amin'ny fampiroboroboana ny Organisation ary hamerina ny fitokisan'ny vondrona fizahan-tany iraisam-pirenena.
Misimisy kokoa momba ny fahamendrehana amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana UNWTO avy amin'i WTN: wtn.travel/decency/